တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၀ န်ထမ်း ခေါ်ယူ မှု ပလက်ဖောင်း သည် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ် ရေးနှင့် ပေါင်းစည်း ရေး သဘောတူညီချက်ကို စိုးရိမ် ခြင်းမရှိဘဲ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည် – Pandaily
Mar 02, 2022, 13:34ညနေ 2022/03/02 14:01:31 Pandaily
တရုတ်၏ ပြည့်စုံသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန် မှု ကင်း သော အနာဂတ်Garnet Faith Limited နှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု မ ပေါင်း သဘောတူညီချက်ကို အင်္ဂါနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် ပြီးစီး မည့် သဘောတူညီ ချက်သည် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၄. ၃ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများ စုပေါင်း အဖွဲ့က ဝယ်ယူ လိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။
Qiancheng Wuyou ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် NASDAQ တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့ပြီး NASDAQ တွင် စာရင်းဝင် သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ် အသားတင် ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၁. ၀ ၈၁ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၇၁ သန်း) ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၉. ၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ မှရရှိသော အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၄၆. ၆ သန်း ရှိပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူ ကာလက ယွမ် ၁ ၇၃ သန်း ရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ အစောပိုင်းတွင် 51Job , Inc သည် Garnet Faith Limited နှင့် နောက်ဆုံး ပူးပေါင်း မှု သဘောတူညီချက် ရရှိ ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၅. ၇ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိက ပိုင္ ျပဳလုပ္ ေရး အစီအစဥ္ကို မေမွ် ာ္လင့္ ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွး သြားႏိုင္
ယခုနှစ် ဇန်န ၀ ါရီလ တွင် 51Job , Inc. က ၎င်းသည် သာမန် ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၉. ၀၅ မှ သာမန် ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၇. ၂၅ သို့ စုစုပေါင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစား မှုကိုလျှော့ချ ရန် ထောက်ခံချက် စာတစ်စောင် ရရှိ ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:၅၈ အြန္လိုင္း အလုပ္ ေၾကာ္ျငာ ကို “ ေသြး ကၽြန္” အျဖစ္ ျပန္ေပးဆြဲ ခံ ခဲ့ရသည္ဟု တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသား ေျပာ
Consortium တွင် DCP Capital Partners II, L.P, Ocean Link Partners Limited နှင့် ကုမ္ပဏီ ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Rick Yan တို့ပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီ ၏အကြီးဆုံး အစုရှယ်ယာ ဖြစ်သော Recruitment Holdings Limited သည် လုပ်ငန်း စု နှင့် အရောင်းအ ၀ ယ် များတွင်ပါ ၀ င် နေသည်။
၅၈ အြန္လိုင္း အလုပ္ ေၾကာ္ျငာ ကို “ ေသြး ကၽြန္” အျဖစ္ ျပန္ေပးဆြဲ ခံ ခဲ့ရသည္ဟု တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသား ေျပာ
ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမွာ အြန္လိုင္း လိမ္လည္ မႈေတြမွာ ပါဝင္ ဖို႔ ျငင္းဆန္ ခဲ့တဲ့ က်န္း စု ျပည္နယ္က တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသား တဦးကို အုပ္စု တစု က ျပန္ေပးဆြဲ ၿပီး "ေသြး ေက်း ကၽြန္" အျဖစ္ အသံုးျပဳ ခဲ့တယ္လို႔ မၾကာေသးခင္က ထြက္ေပၚ ခဲ့တဲ့ သတင္းေတြ ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြ နဲ႔ တ႐ုတ္ အင္တာနက္ သံုးစဲြ သူေတြအတြက္ ထိတ္လန္႔ စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။